အခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကနေ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားကိုပို့ခဲ့လို့ ဝမ်းသာကြည်နူးနေတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ချစ်ဇနီး…. – Cele Oscar
အခက်ခဲတွေရှိနေတဲ့ကြားကနေ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားကိုပို့ခဲ့လို့ ဝမ်းသာကြည်နူးနေတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ ချစ်ဇနီး….
March 26, 2021 By L YC Knowledge
ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ လူထု လှုပ်ရှား မှုမှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ တက်ကြွစွာ ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မှာတော့ အခြေအနေ အရပ်ရပ် ကြောင့် တိမ်းရှောင် နေရ ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့်တော့ Speak out လုပ်ပေး နေတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု နဲ့ တကွဲတပြား နေထိုင် နေရတာ ကို မြင်ပြီး ပရိသတ်တွေ ကလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေကြ တာပါ။ဒီနေ့ ကတော့ ကိုပေါက် ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ဇနီး မွေးနေ့ရက် မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပေါက် ကတော့ ဇနီး ရဲ့ မွေးနေ့ ကို အခက်အခဲ တွေ များစွာကြား ထဲက အမှတ်တရ မွေးနေ့ ဆုတောင်းစာလေး ပေးပို့ လာခဲ့ တာပါ။ ဒါကတော့”အခက်အခဲ တွေကြားထဲ က မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေး ပို့ပေးတဲ့
အိုပါးရေ အရမ်း ချစ်တယ်နော်”သည်း ရေ ဒီနေ့ ကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ မှာ မင်္ဂလာပါ လို့တောင် နှုတ်ဆက် ခွင့်မရတဲ့ နိုင်ငံ အရေးထဲ တို့ တွေဝေးနေကြတာတစ်လနဲ့ရှစ်ရက် ရှိသွားပြီ။အမှတ်တရ နွေဦးပါပဲ သည်းရေ။တို့ ရဲ့ ဝေးကွာ မှုက ​ နွေဦးမှာ အသက်ပေးသွား ကြရတဲ့​ တော်လှန်ရေးမိသားစု တွေရဲ့ဘဝ နဲ့ စာရင်တော့သေးသေးလေးပါ သည်းရေ။ရည်းစား ဘဝက နေ မနှစ်က သည်းမွေးနေ့အထိ အနားမှာ အတူတူ ရှိခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ် မွေးနေ့မှာ အတူတူရှိ မနေနိုင်ခဲ့ဘူး။Sorry ပါ။ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပြီသား၂ယောက်အတွက် အားတင်းပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။(မတောင်းဆိုလည်း ရှိနေပြီး သားဆိုတာသိပါတယ်)အရင်နှစ်ကလို တခြားဆုတွေ အများကြီး တောင်းပေးမယ့် အစား”အရေးတော်ပုံ အောင်ပါစေ”ဆိုရင် သည်းလိုချင်တဲ့ ဆု နဲ့ ပြည့်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
မိုးမကူးခင် ပြန်ဆုံကြ မယ်နော်။အားလုံးကို ချစ်တယ်။ သတိရတယ်။ လွမ်းတယ် ။ သ ည်းရဲ့ အိုပါး အိုပါး စာလေးကို သားသား တို့ကို ဖက်ပြ လိုက်တယ်နော် ။သားငယ် လေးက မေမေ တဲ့ သားသား ဖေဖေ ပြန်မလာတာ ကြာပြီနော်တဲ့💔💔💔💔💔အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။ ” ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာပါ။ ကိုပေါက်ရဲ့ ဇနီးကလည်း ခင်ပွန်း ဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း စာကို ဖတ်ပြီး ကြည်နူး နေတာပါ။ အရေးတော်ပုံကြီး အောင်မြင်ပြီး ခွဲခွာ နေရတဲ့ မိသားစုတွေ အမြန်ဆုံးပြန် ဆုံနိုင်ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
Source and Photo Crd-Htet Nini’s Facebook Account
ဒါရိုကျတာ ကိုပေါကျ ကတော့ မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့ လူထု လှုပျရှား မှုမှာ ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ တကျကွှစှာ ပါဝငျ လှုပျရှားခဲ့ သူတဈဦး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ မှာတော့ အခွအေနေ အရပျရပျ ကွောငျ့ တိမျးရှောငျ နရေ ပမေယျ့လညျး သူ့ရဲ့ လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာ မှ တဈဆငျ့တော့ Speak out လုပျပေး နတော လညျး ဖွဈပါတယျ။ မိသားစု နဲ့ တကှဲတပွား နထေိုငျ နရေတာ ကို မွငျပွီး ပရိသတျတှေ ကလညျး စိတျမကောငျး ဖွဈနကွေ တာပါ။ဒီနေ့ ကတော့ ကိုပေါကျ ရဲ့ ခဈြလှစှာသော ဇနီး မှေးနရေ့ကျ မွတျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုပေါကျ ကတော့ ဇနီး ရဲ့ မှေးနေ့ ကို အခကျအခဲ တှေ မြားစှာကွား ထဲက အမှတျတရ မှေးနေ့ ဆုတောငျးစာလေး ပေးပို့ လာခဲ့ တာပါ။ ဒါကတော့”အခကျအခဲ တှကွေားထဲ က မှေးနေ့ ဆုတောငျးလေး ပို့ပေးတဲ့
အိုပါးရေ အရမျး ခဈြတယျနျော”သညျး ရေ ဒီနေ့ ကရြောကျတဲ့ မှေးနေ့ မှာ မင်ျဂလာပါ လို့တောငျ နှုတျဆကျ ခှငျ့မရတဲ့ နိုငျငံ အရေးထဲ တို့ တှဝေေးနကွေတာတဈလနဲ့ရှဈရကျ ရှိသှားပွီ။အမှတျတရ နှဦေးပါပဲ သညျးရေ။တို့ ရဲ့ ဝေးကှာ မှုက ​ နှဦေးမှာ အသကျပေးသှား ကွရတဲ့​ တျောလှနျရေးမိသားစု တှရေဲ့ဘဝ နဲ့ စာရငျတော့သေးသေးလေးပါ သညျးရေ။ရညျးစား ဘဝက နေ မနှဈက သညျးမှေးနအေ့ထိ အနားမှာ အတူတူ ရှိခဲ့ပမေယျ့ ဒီနှဈ မှေးနမှေ့ာ အတူတူရှိ မနနေိုငျခဲ့ဘူး။Sorry ပါ။ကနျြးမာရေး ဂရုစိုကျပွီသား၂ယောကျအတှကျ အားတငျးပေးပါလို့ တောငျးဆိုပါတယျ။(မတောငျးဆိုလညျး ရှိနပွေီး သားဆိုတာသိပါတယျ)အရငျနှဈကလို တခွားဆုတှေ အမြားကွီး တောငျးပေးမယျ့ အစား”အရေးတျောပုံ အောငျပါစေ”ဆိုရငျ သညျးလိုခငျြတဲ့ ဆု နဲ့ ပွညျ့မယျ လို့ ထငျပါတယျ။
မိုးမကူးခငျ ပွနျဆုံကွ မယျနျော။အားလုံးကို ခဈြတယျ။ သတိရတယျ။ လှမျးတယျ ။ သ ညျးရဲ့ အိုပါး အိုပါး စာလေးကို သားသား တို့ကို ဖကျပွ လိုကျတယျနျော ။သားငယျ လေးက မမေေ တဲ့ သားသား ဖဖေေ ပွနျမလာတာ ကွာပွီနျောတဲ့💔💔💔💔💔အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ။ ” ဆိုပွီး ရေးသား ထားတာပါ။ ကိုပေါကျရဲ့ ဇနီးကလညျး ခငျပှနျး ဖွဈသူရဲ့ မှေးနဆေု့တောငျး စာကို ဖတျပွီး ကွညျနူး နတောပါ။ အရေးတျောပုံကွီး အောငျမွငျပွီး ခှဲခှာ နရေတဲ့ မိသားစုတှေ အမွနျဆုံးပွနျ ဆုံနိုငျကွပါစေ လို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။
နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ Voice out လုပ်ပေးသွားမယ့်လို့ပြောလာတဲ့ မေမြတ်နိုး
စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတဲ့ လှိုင်သာယာကပြည်သူတွေကို အစားသောက်တွေလှူဒါန်းရန် ပြင်ဆင်နေတဲ့ နေဒွေးရဲ့ ဗီဒီယို